Kulesi sifundo esithi Substantive, sizokunikeza imininingwane ngamagama esiJalimane, okungamagama esiJalimane. Sizonikeza imininingwane ngamagama aseJalimane, okungukuthi, amagama ezinto, amagama, izinto.
Bangani, sigxila emaphethini odinga ukukwazi kanye nolwazi oludingayo ukuze ulubambe ngekhanda ezihlokweni zezifundo esizishicilelayo ukuze ufunde isiJalimane. Kodwa-ke, sidinga ukufaka izihloko ezibalulekile zohlelo lolimi okufanele wazi ngenkathi ufunda isiJalimane. Isihloko esizoxoxa ngaso kulesi sifundo kuzoba ngamagama esiJalimane (Substantive). Ukuze lesi sihloko siqondakale kangcono kakhulu, singaqala isifundo sethu ngokugcizelela ukuthi kufanele siqondwe kahle ezindabeni zaseJalimane esike sazishicilela phambilini.
Ukuchaza igama kafushane, kubizwa ngamagama esiwanika izidalwa. Njengolimi lwethu, kunezinhlobo ezinjengobunye, ubuningi, okulula, okuhlanganisiwe, amagama abambekayo nokhonkolo ngesiJalimane. Futhi, njengolimi lwethu, kukhona nezinhlobonhlobo ezifana nesimo esihlanganisiwe-e sebizo. Kuthiwa kukhona amagama acishe abe ngama-250.000 ngesiJalimane, futhi wonke ama-initials awo wonke amagama abhalwe ngofeleba, kungakhathalekile amagama athile noma ajwayelekile. Ukukubeka kafushane, bathatha amagama (der, das, die) aziwa njengezihloko ngamabizo ohlobo ngalunye.
Kungenzeka ukuthi uhlole amagama ngolimi lwesiJalimane ngokuwahlukanisa ngemikhakha emithathu. Lezi;
Ubulili Besilisa (Amagama Abesilisa)
Uhlobo Lomfazi (Amagama Abesifazane)
Ukuzalela Okungathathi hlangothi (Amagama Angabulili) bahlukaniswe njenge.
Ngokomthetho wohlelo lolimi osetshenzisiwe, leli phuzu linikezwa amagama abesilisa anendatshana ethi "der", owesifazane kumagama abesifazane anendatshana ethi "die", namagama angathathi hlangothi anendatshana ethi "das".
Ubulili BamaJalimane Abesilisa (Amagama Abesilisa)
Amabizo agcina ngezinhlamvu -en, -ig, -ich, -ast angabizwa ngokuthi awesilisa. Ngaphezu kwalokho, amagama ezinyanga, izinsuku, izinkomba, izinkathi zonyaka, amagama azo zonke izidalwa zobulili besilisa, namagama ezimayini nemali nawo angabesilisa.
Ukuzala Kwabesifazane BaseJalimane (Amagama Abesifazane)
Amagama agcina ngezinhlamvu - e, -ung, -keit ,, -ion, - in, -ei, -heit angabizwa njengawesifazane. Ngaphezu kwalokho, amagama, izinombolo, imbali, umfula, umfula, izihlahla nezithelo amagama azo zonke izidalwa zesifazane nazo zingabesifazane.
Ukuzalwa KwaseJalimane Okungathathi hlangothi (Amagama Angabulili)
Amagama ajwayelekile kubo bobubili ubulili, kanye nedolobha, izwe, inzalo, izinsimbi kanye namagama asuselwe konke kubhekwa njengohlobo olungathathi hlangothi.
Qaphela: Ukwenziwa jikelele kwenziwe ngale ndaba eshiwo. Sincoma ukuthi uthathe isichazamazwi sesiJalimane njengomthombo wokuthola ukuthi yiluphi uhlobo lwamagama ongaqinisekile ngalo. Ngale ndlela, uzofunda amagama amasha ozowafunda ngokusetshenziswa okulungile.
# Ubulili BamaJalimane Abesilisa (Amagama Abesilisa)
# Ukuzala Kwabesifazane BaseJalimane (Amagama Abesifazane)
# Ukuzalwa KwaseJalimane Okungathathi hlangothi (Amagama Angabulili)